Yandex.Disk – software ah in uu kaydiyo faylasha kasta oo lagu kaydiyo daruurtii. software wuxuu bixiyaa meel lagu kaydiyo xogta in bakhaar faylka, in la kordhin karaa haddii la doonayo a. Yandex digsi bixisaa iibsiga ilaaliyo xogta by xidhiidhka ka Windows XP iyo kaydinta xogta ammaan in bakhaar. software The u saamaxaaya in ay la saaxiibo wadaagaan xogta iyo siin helaan in faylasha qaarkood dadka isticmaala shaqsi. Sidoo kale Yandex digsi taageertaa .Wadashaqayntaas of files u dhexeeya qalabka wax iyada oo internet-ka.
Management of files kaydiyaa
Secure xogta suuqa kala iibsiga si ay u kaydinta
.Wadashaqayntaas File dhexeeya xeesha
Yandex.Disk Software la xiriira:
Qalab ayaa si xor ah u dejisan macluumaadka kala duwan lagu kaydiyo daruurtii. Software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas xogta iyo is-dhaafsiga haboon ee files.
EaseUS Todo PCTrans 9.8 Free iyo Pro
software The si ay u gudbiyaan xogta iyo software ka mid computer ah in kale iyada oo loo marayo shabakad agtaada ah ama iyadoo la abuurayo image file a.
Tool inay soo dejisan iyo wadaagaan files ee internet-ka. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si deg deg ah ka soo dejisan faylasha iyo waxaa ka mid ah ciyaaryahankii ugu gundhig u ciyaaro files warbaahinta.
WinSCP 5.11.2 Standard iyo Portable
Tool si loo xakameeyo oo ka arrinsashada macluumaad GPS ah. Software ka kooban yahay dhowr ah qalab waxtar leh oo kuu ogolaanaya in aad in ay is dhaafsadaan xogta la codsiyada ama qalab kale.
Software ayaa go'aamisa xogta farsamada ee xubno ka qayb kombiyuutarka ah. Utility ayaa ku siinayaan shaqada leh noocyo badan ka kooban kooban.